Ku-dhismay/Telescopic Soosaarayaasha Hood-Shiinuhu Ku-dhismay/Shiinaha Hood Warshada & Alaabta
Isku-dhafka Hood Cooker 913
Hoods isku dhafan oo qaabaysan cabbirro kala duwan si ay u daboolaan baahiyaha golaha.Awoodda nuugista laga bilaabo hooseeya (550m3 / h) ilaa sare (1000m3 / h) ee saldhigga ikhtiyaariga ah ee cabbirka jikada. Dhammaantood si dhakhso ah ayay hawada u nadiifiyaan oo ka saaraan qiiqa jikada oo leh sanqadh hooseeya ha carqaladeynin sheekada karinta dadka.
Hood panel-ka ugu weyn wuxuu noqon karaa bir aan kala go 'lahayn, noocyada rinjiga midabka, galaaska si aad u wanaagsan oo kala duwan qaabka jikada iyo qaabka golaha Tamarta ku filan iftiinka LED ee qaabka wareegsan ama xariijinta LED-ka gaarka ah waa ikhtiyaar ikhtiyaari ah sida aad jeceshahay habka xakamaynta oo leh qalab farsamo oo sahlan in lagu shaqeeyo. Taabasho aad u qurux badan oo buuxda oo leh hawlo badan oo caqli badan sida saacada, kontoroolka fogaanta iyo saldhigga WiFI ee guddiga kala duwan ee aad doorato.
3/4 Xawaaraha hawo-qaadista waxay u fiican tahay baahida cunto karinta ee kala duwan oo leh hab fudud oo lagu rakibo Waxaa loo adeegsaday filtarrada dufanka aluminium ee la dhaqi karo, 4 lakab oo aluminium + 1 lakab ah oo SS ah si loo soo jiito indhaha isticmaalaha.
60cm Hood kariyaha Iskoofigga Isku-dhafan oo leh 2-xawaare Soosaarid 906/909
906: Hood Cooker Telescopic 60cm oo leh heerka soo saarista 380m³/h.2 xawaare hawo-qaadis ah oo lagu xakameeyo furaha dhagaxa.Iftiinka LED wuxuu sii shaqaynayaa in ka badan 100,000 saacadood.
909: Hood Cooker Telescopic 60cm oo leh heerar badan oo soosaarid ah ku dooro matoor cadaadis dhawaqeed hooseyaIftiinka LED wuxuu sii shaqaynayaa in ka badan 300,000 saacadood.
Laba Qaab Hawo-qaadasho Ikhtiyaar ah: dibadda uga soo bixi tuubada tuubada ee lagu rakibay ama dib u warshadaynta gudaha iyada oo leh filtarrada kaarboonka.
Makiinada weelka wax lagu dhaqo si badbaado leh filter aluminium.